Tsidiho ny tanàna taloha any Jerosalema anio ary amin'ny fomba ara-panahy
Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Tsidiho ny tanàna taloha any Jerosalema anio ary amin'ny fomba ara-panahy
Febroary 7, 2021
Ny fandehanana an-tanàna taloha any Jerosalema dia dia tsy hohadinoin'ny ankamaroany. Koa satria manidy an'izao tontolo izao ny COVID-19, dia azo zahana amin'ny fomba saika ity fitsidihana ity.
Tambajotra fizahan-tany manerantany manohana ny fizahan-tany Virtual
Nanasa ny Tanàna taloha i Jerosalema
Ny fitsangatsanganana an-tsokosoko amin'ny zoom dia manampy ireo mpitari-dia eo an-toerana hahatafita velona amin'ny krizy
Miresaha amin'ny mpitari-dalana nandritra ny 5,000 1 taona teo amin'ny tantara nandritra ny XNUMX ora fitsangatsanganana an-tsokosoko tao amin'ny Old City of Jerusalem.
Ny fitsidihan'ny butikety an'i Amazing Jerusalem dia laharana faha-1 amin'ny Isiraely. Manantena izahay fa hatolotray anao tsy ho ela izany indray. Mandra-pahatongan'izany dia afaka miditra amin'ny fitsidihanay virtoaly ianao.
Amin'ity fitsidihana ity dia hahatsapa ireo toerana masin'i Jerosalema ianao eo am-pijerena sary, sary mihetsika, sary an'habakabaka ary sary drone ankoatry ny fijery tsy manam-paharoa izay tsy azonao ananana akory na dia amin'ny fitsidihana tena izy aza.
Tendrombohitra Oliva mijery
Jereo ny tanàna Citadel
Ny rindrina mitomany
Temple Mount (Anisan'izany ny Dome of the Rock sy Al-Aqsa Mosque)
Fiangonana Holy Sepulcher
Ity zotram-piaramanidina ity dia manarona ireo toerana masina indrindra ho an'ireo fivavahana telo monotheista - ny fivavahana jiosy, ny kristianisma ary ny finoana silamo ary mampiseho ny fifandraisana misy eo amin'ireo toerana ireo, ilay tanàna voafefy kilometatra kilometatra toradroa ao Old Jerusalem.
Fitsidihana torolàlana virtoaly - topy maso tsara momba ny Tanànan'i Jerosalema taloha. Amit dia nikarakara fampisehoana tena tsara sy voalamina tsara tamin'ny tanàna taloha. Nataony izay hahitantsika toerana ara-jeografika tsara amin'ny sari-tany sy ny maodely; niverina tsy tapaka tamin'ny fandaharam-potoana izy mba hanampy anay hivezivezy amin'ny tantaran'ny tanàna ary nanome fanazavana tsara momba ny lanjan'ireo toerana samihafa ho an'ny fivavahana isan-karazany. Topi-maso virtoaly tena tsara momba ny tanàna izany.
"Fitsangatsanganana" lehibe an'ny Isiraely! Nandray ny telo tamin'ireto fitsangatsanganana virtoaly an'i Israel ireto aho, ary nahafinaritra ry zareo! Fitsaharana tsara ho an'ny "fitsangatsanganana" mandritra ny fotoanan'ny corona. … I Amit sy i Dorit no mpitari-dia ahy - samy mahalala tsara momba ny faritra sy ny tantaran'i Israely izy ireo, ary manao izay hahavelomany ny fitsidihana! Mamaly izy ireo, ary mamporisika, ny fanontaniana rehetra, sariaka, ary mandeha tsara ny fitsidihana. Mikasa ny handray bebe kokoa aho! ”
Natsangana tamin'ny maty i Jerosalema - ampahafantaro izany. Fitsidihana virtoaly tao amin'ny Zoom androany alina izao. Amit dia mpitari-dalana mahatalanjona manana fahalalana be dia be. Nandeha fitsangatsanganana roa aho ary mitarika herintaona, ary ny fampahalalana izay nangoniko androany hariva dia tena nanampy tokoa. Mazava be izy tamin'ny fanazavany momba ny toerana misy ireo fiangonana sy ny lanjan'ny faritra ao Jerosalema, ary koa ireo andinin-teny ao amin'ny Baiboly. Ora tsara lany!
Azo atao ny fitsidihana Mpanolotsaina
Ny World Network Network dia nanomboka an Vondrona mahaliana ho an'ny fizahantany virtoaly ary vondrona iray hanohanana ireo mpitarika fizahan-tany.
Miaraka amin'ny The World Federation of Tourist Guide Association WTN sy ny Rebuilding Travel dia manasa fankalazana virtoaly eran-tany amin'ny 15 Febroary.
Momba bebe kokoa ny fampahalalana bebe kokoa https://rebuilding.travel/2021/02/07/international-tourism-guide-day/
Ny tsipika Media contribs to this article.
Mibitsibitsika ny vintana amerikana tombontsoa amin'ny fampiasam-bola ho an'i Kiobà
Vaksiny: 80% -97% ny any Afrika no sahirana ary toy izany koa ny fizahantany